ဖီးလ်ဂျုံးစ်ကိုဘာကြောင့်အခွင့်ရေးပေးသင့်သလဲဆိုတာပြောပြသွားခဲ့တဲ့ သရဲနီခံစစ်မှူးဟောင်း ဗီဒစ် - Myanmar Man United.
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်မှာ ရွှေရောင်လွမ်းတဲ့ နေ့ရက်တွေရှိစဉ်အခါ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန် လက်ထက်မှာ ခံစစ်မှာ တံတိုင်းကြီးသဖွယ် ကာပေးခဲ့တဲ့ ဖာဒီနန် နဲ့ ဗီဒစ်အတွဲ ဟာဥရောပအကောင်းဆုံး ခံစစ်အတွဲဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်….ထိုစဉ်က ဗီဒစ်က ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ ဂိုးမပေးရဖို့ ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်မယ့်လူစားမျိုးမို့ပါဘဲ….ဂိုးမပေးရဖို့ ခေါင်းဝင်ခံလိုက်တာတွေရှိသလို နာခေါင်းသွေးတေ မျက်နာမှာသွေးတေ ပေပွနေတာတောင်သုပ်ပြီး ဘောလုံးဆက်ကစားခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ လက်စွဲတော် ခံစစ်မှူးတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
ယခုအခါ မှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်မှာ ဗီဒစ်တို့လိုဘဲ ယူနိက်တက် DNA ရှိတဲ့ ကစားသမားတဦးကျန်နေသေးပါတယ်… အဲ့ဒီလူက ဖီးဂျူံးလ်ပါ… ဗီဒစ်က ဖီးဂျုံးလ်ကို ဘာလို့ ဒုတိယအကြိမ် အခွင့်အရေးပေးသင့်လဲဆိုတာ ယခုလိုပြောလာပါတယ်..
ဗီဒစ်က ” ဖီးဂျုံးလ်က ယူနိက်တက် DNA ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ရဲ့ နောက်ဆုံးကစားသမားပါ…သူ့မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်….သူဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလအတန်ကြနားနေရပေမဲ့ သူ့ မှာ ယူနိက်တက်အတွက် ကြီုးစားချင်စိတ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပြသသွားခဲ့ပါတယ်…သူက ယူနိက်တက်အနိုင်ရဖို့ ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကစားသမားပါ…သူ့လို ယူနိက်တက် DNA ရှိပြီး အသင်းအပေါ် ပေးဆပ်လိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက် တခြားခံစစ်မှူးတွေထက် သူ့ကို ဒုတိယအကြိမ် အခွင့်အရေးပိုပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်….” ဟု ပြောသွားခဲ့ပါတယ်….
ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်က ‘ပရိသတ်တွေရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံနေရပေမယ့်’ သူနဲ့အတူကစားခဲ့တဲ့ သရဲနီဖီးလ်ဂျုံးစ်ဟာ “အလွန်အရည်အချင်းရှိတဲ့သူ” လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိုဝင်က “သူဟာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်နေဆဲပါ ။ “လူတော်တော်များများက သူ့ကို လှောင်ပြောင်ကြတယ်။သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာ မှတ်တမ်းကို ရယ်စရာလုပ်နေတာက မကောင်းပါဘူး။“လူတော်တော်များများက သူ့ကို လှောင်ပြောင်ကြပေမယ့် သူ့အရည်အသွေးကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါက အရမ်းထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။မန်ယူ ကျွန်တော် ရှိတုန်းက လေ့ကျင့်ရေးမှာ ဂျူံးစ် က “သူက အရမ်းကောင်းတယ်။ အရမ်းမြန်တယ်။ အခုခေတ်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နောက်ခံလူတ‌စ်ယောက်ပါ။”
နောက်ထပ်ထူးခြားချက် ဗာရန်းနဲ့ ဂျုံးစ်ကို ဗဟိုခံစစ်မှာရေရှည်အထိုင်ချဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်ကအိပ်မက်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၁ မှာ လန်းစ်အသင်းမှာရှိနေတဲ့ ဗာရန်းကိုခေါ်ယူပြီး ဂျုံးစ်နဲ့တွဲကာ မန်ယူဗဟိုခံစစ်အတွက် အသုံးပြုဖို့ ဖာဂူဆန်ကစီစဉ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့် ဗာရန်းက ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ဖာဂူဆန်ရဲ့အကြံမဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီစကော့သားကြီးက ဂျုံးစ် ဟာ မန်ယူကစားသမားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးသောတစ်ယောက်လို့ ဖာဂူဆန်က ထုတ်ပြော ထားတာကြောင့် ဖာဂူဆန်အိပ်မက်ကို လက်ရှိနည်းပြရန်းနစ်ခ်က ဆက်လက်အသက်သွင်းပေးဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဖီးလျဂြုံးဈကိုဘာကွောငျ့အခှငျ့ရေးပေးသငျ့သလဲဆိုတာပွောပွသှားခဲ့တဲ့ သရဲနီခံစဈမှူးဟောငျး ဗီဒဈ
မနျခကျြစတာယူနိကျတကျမှာ ရှရေောငျလှမျးတဲ့ နရေ့ကျတှရှေိစဉျအခါ ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျ လကျထကျမှာ ခံစဈမှာ တံတိုငျးကွီးသဖှယျ ကာပေးခဲ့တဲ့ ဖာဒီနနျ နဲ့ ဗီဒဈအတှဲ ဟာဥရောပအကောငျးဆုံး ခံစဈအတှဲဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ….ထိုစဉျက ဗီဒဈက ဘာကွောငျ့နာမညျကွီးလဲဆိုတော့ ဂိုးမပေးရဖို့ ဘာဘဲလုပျရလုပျရ လုပျမယျ့လူစားမြိုးမို့ပါဘဲ….ဂိုးမပေးရဖို့ ခေါငျးဝငျခံလိုကျတာတှရှေိသလို နာခေါငျးသှေးတေ မကျြနာမှာသှေးတေ ပပှေနတောတောငျသုပျပွီး ဘောလုံးဆကျကစားခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆနျရဲ့ လကျစှဲတျော ခံစဈမှူးတဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ…
ယခုအခါ မှာ မနျခကျြစတာယူနိကျတကျမှာ ဗီဒဈတို့လိုဘဲ ယူနိကျတကျ DNA ရှိတဲ့ ကစားသမားတဦးကနျြနသေေးပါတယျ… အဲ့ဒီလူက ဖီးဂြူံးလျပါ… ဗီဒဈက ဖီးဂြုံးလျကို ဘာလို့ ဒုတိယအကွိမျ အခှငျ့အရေးပေးသငျ့လဲဆိုတာ ယခုလိုပွောလာပါတယျ..ဗီဒဈက ” ဖီးဂြုံးလျက ယူနိကျတကျ DNA ကနျြရှိနသေေးတဲ့ ဆာအဲလကျဖာဂူဆနျရဲ့ နောကျဆုံးကစားသမားပါ…သူ့မှာ စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ….သူဟာ ဒဏျရာကွောငျ့ ကာလအတနျကွနားနရေပမေဲ့ သူ့ မှာ ယူနိကျတကျအတှကျ ကွီုးစားခငျြစိတျရှိသေးတယျဆိုတာ ပွီးခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပွသသှားခဲ့ပါတယျ…သူက ယူနိကျတကျအနိုငျရဖို့ ဘာမဆိုလုပျမယျဆိုတဲ့ ကစားသမားပါ…သူ့လို ယူနိကျတကျ DNA ရှိပွီး အသငျးအပျေါ ပေးဆပျလိုစိတျရှိတဲ့အတှကျ တခွားခံစဈမှူးတှထေကျ သူ့ကို ဒုတိယအကွိမျ အခှငျ့အရေးပိုပေးသငျ့တယျလို့ထငျပါတယျ….” ဟု ပွောသှားခဲ့ပါတယျ….
ယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျး မိုကျကယျအိုဝငျက ‘ပရိသတျတှရေဲ့လှောငျပွောငျခွငျးကိုခံနရေပမေယျ့’ သူနဲ့အတူကစားခဲ့တဲ့ သရဲနီဖီးလျဂြုံးဈဟာ “အလှနျအရညျအခငျြးရှိတဲ့သူ” လို့ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။အိုဝငျက “သူဟာ အရမျးကောငျးတဲ့ ကစားသမား ဖွဈနဆေဲပါ ။ “လူတျောတျောမြားမြားက သူ့ကို လှောငျပွောငျကွတယျ။သူ့ရဲ့ ဒဏျရာ မှတျတမျးကို ရယျစရာလုပျနတောက မကောငျးပါဘူး။“လူတျောတျောမြားမြားက သူ့ကို လှောငျပွောငျကွပမေယျ့ သူ့အရညျအသှေးကို ကြှနျတျောတို့ သိပါတယျ။ သူ့ခတျေသူ့အခါက အရမျးထူးခြှနျတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့သိပါတယျ။မနျယူ ကြှနျတျော ရှိတုနျးက လကေ့ငျြ့ရေးမှာ ဂြူံးဈ က “သူက အရမျးကောငျးတယျ။ အရမျးမွနျတယျ။ အခုခတျေအတှကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ နောကျခံလူတ‌ဈယောကျပါ။”
နောကျထပျထူးခွားခကျြ ဗာရနျးနဲ့ ဂြုံးဈကို ဗဟိုခံစဈမှာရရှေညျအထိုငျခဖြို့ကွံစညျခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆနျရဲ့လှနျခဲ့တဲ့ ၁၁ နှဈကအိပျမကျတကယျဖွဈလာခဲ့တာပါ။ပွီးခဲ့တဲ့၂၀၁၁ မှာ လနျးဈအသငျးမှာရှိနတေဲ့ ဗာရနျးကိုချေါယူပွီး ဂြုံးဈနဲ့တှဲကာ မနျယူဗဟိုခံစဈအတှကျ အသုံးပွုဖို့ ဖာဂူဆနျကစီစဉျခဲ့တာပါ။ဒါပမေယျ့ ဗာရနျးက ရီးရဲလျမကျဒရဈကိုရှေးခယျြသှားခဲ့တဲ့အတှကျ ဖာဂူဆနျရဲ့အကွံမဖွဈမွောကျခဲ့ပါဘူး။ဒီစကော့သားကွီးက ဂြုံးဈ ဟာ မနျယူကစားသမားတှထေဲမှာအကောငျးဆုံးသောတဈယောကျလို့ ဖာဂူဆနျက ထုတျပွော ထားတာကွောငျ့ ဖာဂူဆနျအိပျမကျကို လကျရှိနညျးပွရနျးနဈချက ဆကျလကျအသကျသှငျးပေးဦးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
ရော်နယ်ဒိုမပါဝင်တဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ squad အပေါ်ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ဆိုင်မွန်ဂျော်ဒန်
ဟယ်ရီကိန်း သို့ ဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက်
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ(၅)ကြိမ်ဆက်ပါဝင်ကစားနိုင်ဖို့ သရဲနီဘုရင်ကြီးရော်နယ်ဒိုကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ မိခင်ဒါလောရက်စ်